DeMIX Pro Fanesorana ny feo & fitaovana | AudioSourceRE
Tsindrio eto raha hanandrana Demix Pro ho an'ny maimaim-poana ho an'ny andro 7
INONA NY DEMIX PRO SOFTWARE HANALANA VOCAL?
Ataovy toy ny teo aloha ny fifangaroan'ny feo. DeMIX Pro dia lozisialy mahaleo tena izay manambatra ny algorithman fitokana-monina AI manara-penitra miaraka amina fanitsiana spectral efa voadio hanomezana injeniera audio sy mastering, remixers, profahalalahana tsy manam-paharoa ny ducers, DJ, ary ny mpitendry mozika hamoronana feon-kira, amponga, basika ary fitaovana hafa avy amin'ny fangaro efa misy.
Mety amin'ny fanesorana feo avo lenta, famoronana fitaovana ary prosantionany amin'ny kalitaon'ny duction. DeMIX Pro manome fahafaha-manao tsy manam-paharoa amin'ny fisarahana làlana tsy misy fetra, tsy manimba, fiasa manambatra mety, mpanambatra multichannel namboarina ary ny fahaizana manao proalefaso ny feo nesorina sy ny reverb mifandraika amin'izany amin'ny làlan'ny tsirairay ho an'ny fifehezana feo tanteraka.
Mamorona fisarahana lalana avo lenta tsy voatanisa ho an'ny remixing, fampifangaroana, fifehezana indray ary famoahanaprorindran-damina.
INONA INDRINDRA NY IZAO ao amin'ny VERSION 2.3?
DeMIX Pro Ny andiany 2.3 dia misy karazana improvements sy ny fampiasa vaovao ary misy amin'ny a free upgrade ho an'ny mpampiasa karama efa misy;
Fotoana fisarahana haingana sy fisintomana azo antoka kokoa
“Rindrambaiko fitrandrahana tsara indrindra nampiasako hatrizay, amporisihiko fatratra izy io.”
Mpandresy Award Grammy 3-Time
Mpisaraka Vocal, Vocal / Instrument, Drum, Bass & Pan-based separators rehetra
Fanovana Spectral Advanced
Manasarà, manadio, mampifangaro ary manambatra làlana tsy voafetra
Melody Selection / Editing Tools hanasarahana ny ampahany tadiavinao
Fisarahana sy fanovana tsy manimba
Manohana hatramin'ny audio 24bit 192kHz
JEREO DEMIX PRO INDRINDRA
DEMIX PRO sary
Esory ho azy ny feo rehetra, na kendreo ny tsipika tononkira tsirairay
Saraho ho anaty isa na làlana tsy voafetra ny hiranao, ary avereno jerena amin'ny sidina
Ampiasao ny tonian-dahatsoratry ny spectral ary ataovy tonga lafatra ny fisarahana